Al-Shabaab oo sheegtay in xabadooda ay ciidanka Siere-leone ku qasabtay iney dalka ka baxaan
Xoogaga Al-Shabaab ayaa waxay ka hadleen qorshaha ciidanka Sierria Leone ay kaga baxayaan gudaha Soomaaliya, ka dib markii la waayay ciidan lagu bedelo kuwa Soomaaliya jooga sababo la xiriira markii cudurka Ebola oo dalkooda fara ba’an ku haya.
Gudoomiyaha Al-Shabaab ugu qaabilsan gobolada Jubooyinka Sheekh C/raxmaan Xudeyfa ayaa sheegay iney filayeenin Ciidamada Sierra Leone ay isaga baxaan Jubbooyinka.
“Ciidamada Sierra Leone way sii joogi waayeen Gobolka Jubbada Hoose, xabadda mujaahidiinta oo xanuunjisay awgeed taasoo ay adkeysan waayeen” ayuu yiri Shiikh Xudeyfa oo la hadlay warbaahinta taageerta Al-Shabaab.
Sheekh C/raxmaan Xudeyda ayaa xusay tan iyo markii ciidamada Sierra Leone ay cagta soo dhigeen Kismaayo, Afmadow iyo Taabto inay ku bilaabatay rasaasta dagaal-yahanada Al Shabaab, ayna u adkeysan kari waayeen.
“Haddii sida ay sheegayaan la waayey ciidamo bedela kuwa hadda jooga ayaa lagu amri lahaa iney sii joogaan, arintaas waxay ku tuseysaa in arintaas ay iska tahay marmarsiiyo, sababta dhabta ah ee ay u baxayaana ka cararka xabada mujaahidiinta” ayuu yiri Shiikh Xudeyfa.
Ciidamada Sierra Leone ayuu sheegay in khasaarihii ugu xooganaa ay ku gaarsiiyeen inta u dhaxeyso Taabto iyo Dhoobley, xilli ay doonayeen inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan, isagoo xusay iney gaadiid iyo askar badan ku waayeen.
Toddobaadkii hore ayey aheyd markii la go’aamiyay in dib loogu celiyo dalkooda ciidamada Siere-leone markii la waayay ciidan kale oo bedel u noqda sababo ku aadan cudurka Ebola oo si weyn ugu sii baahaya dalkaasi, iyagoo dalkooda dib ugu laabanaya bisha soo socoto ee Janaayo.